DAAWO: Duqa Hargeysa oo Shacabka Hargeysa jawaab layaab leh ka siiyeen dhacdadii Muqdisho.
HARGEYSA(P-TIMES) – Qaar kamid ah Shacabka magaalada Hargeysa ayaa jawaab celin adag kala hor yimi hadal kasoo yeeray Duqa magaaladaas Cabdiraxmaan Solteco oo sheegay in Bisadaha ku nool Hargeysa ay ka xaquuq wanaagsan yihiin shacabka kunool caasumada Soomaaliya ee Muqdisho.
Hadalkas ayaa noqday mid si weyn baraha bulshada loogu falanqeeyey, dad badan ayaana dhaliilay hadalka Duqa Hargeysa, waxayna sheegeen in uu ahaa mid muujinaya ficilo cunsuriyad iyo naceyb gaar ah u muujinaya dadka Soomaaliyeed.
Warbaahinta gudaha muuqaalo laga baahiyey ayaa muujinaya dadweynaha oo sheegaya in Duqa Hargeysa aan loo dooran arrimaha la xariira u jawaabida iyo ka hadlida siyaasadda, balse loo doortay arrimaha bulshada wax ka qabashadooda.
Cabashada dadweynuhu waxay ka muujiyeen jidad xumida caasumada Hargeysa oo ay adag tahay in aad si fudud uga baxdo mashquulka ka jira awgiis, sidaas oo kale waxay sheegeen in ficilada la xariira arrimaha jidadkaas ay tahay in lagula xisaabtamo Solteco.